နောက်ဆုံးတော့ ဒီနေ့ကိုရောက်လာပါပြီ! FBS အောင်မြင်မှုလမ်းမှာ နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုကို ယနေ့ဆင်နွှဲကြပါပြီ။ ၉သန်းသော ရောင်းဝယ်သူများ - ဒါဟာ တကယ့်အထင်ကြီးစရာ အရေအတွက်ပါ၊ FBS အဖွဲ့မှ အလွန်ဂုဏ်ယူလျှက်ရှိပါတယ်!
FBSဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်ကမှ Forex စိတ်အားထက်သန်သူများဖြင့် ပြင်းပြပြီး၊ ကျွမ်းကျင်တဲ့ အသေးစာလေးကနေစခဲ့တယ်ဆိုတာ ယုံဖို့ခဲယဉ်းပါတယ် - ခုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြစ်နေပါပြီ! ၉သန်းသော ရောင်းဝယ်သူများ - သင်စိတ်ကူးနိုင်ပါသလား? ဒါဟာ အာရပ်စော်ဘွားပြည်ထောင်စု၏ လူဦးရေလောက်ကို ကြီးမားလုနီးဖြစ်နေပါပြီ!
တွေးကြည့်ပါ! လက်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၉၀၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ပါတနာများနှင့် ရောင်းဝယ်သူများ၊ နိုင်ငံတကာပြပွဲများနှင့် ဆုများ - FBSဟာ ခုဆိုရင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အကောင်းဆုံးအကျိုးဆောင် ထိပ်တန်း၂၀စာရင်းထဲ ပါသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး၊ ကျွန်တော်တို့၏ ရောင်းဝယ်သူများနှင့် ပါတနာများကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့၏ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တန်ဖိုးထားပါသည်။ ၉သန်းသောရောင်းဝယ်သူများဟာ ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြီးထွားလာကြောင်း အထင်ကရ ပြယုဂ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ FBSကိုရွေးချယ်သည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!